शर्कबर्ब: अज़रबैजानी व्यञ्जन को नुस्खा
खाना र पिउने, डेसर्ट
निश्चित रूपमा तपाईले पहिले नै प्रसिद्ध अज़रबैजान नैतिकताको बारेमा सुनेको छ, जुन शिकरुर भनिन्छ। यो मीठे को लागि नुस्खा लगभग दुनिया भर फैलिएको छ, चलो प्रयास गरौं र हामी यो मास्टर गर्नेछ। तपाईंले यो उपचारको लागि सबैलाई आवश्यक छ, तपाई सजिलै संग कुनै पनि किराना स्टोरमा किन्न सक्नुहुन्छ, र सायद यसलाई तपाइँको फ्रिजमा भेट्टाउनुहोस्। पानाको तयारीको लागि कुनै पनि विदेशी सामग्रीहरू हामीले आवश्यक पर्दैन।
निस्सन्देह, खाना पकाउने प्रविधिमा केही सुविधाहरू छन्। यो भन्न सकिँदैन कि जटिलताको स्तर शून्य छ, केही कौशल आवश्यक पर्नेछ। तर यदि तपाई जान्नुहुन्छ कि कसरी टेस्टको साथ काम गर्ने र कम से कम एक पटक तपाईंको जीवनमा भित्तामा बनाइयो, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले शेबबर्बरमा लाग्नु हुनेछ। तस्बिर चरण-दर-चरणको साथ नुस्खा, जुन हामी तल उपस्थित हुनेछौं, निश्चित रूपमा तपाइँलाई अनिश्चितताबाट हटाउन र व्यापारमा तल मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।
नुस्खाको उत्पत्ति र वितरण
विभिन्न राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय व्यञ्जनका शोधकर्ताहरूले आश्वासन पाएका छन् कि यो व्यभिचार ईरानमा देखा पर्यो। यो प्रारम्भिक समयबाट तैयार गरिएको थियो र भेटी इक्विनोक्समा तालिकामा सेवा गर्यो। बढ्दो चन्द्रको आकारमा लाइट पाई रात आकाशसँग सम्बन्धित थिए। सयौं वर्ष पहिले ईरानहरूले आज यो अवकाश (नोवोजर) मनाउँछिन्, टेबलमा त्यस्तै उपचार दिने।
समयको दौडान, मध्य मध्यमा फैलिएको उपचार। तर, आश्चर्यजनक कुरा, संसारले अजरबैजानको राष्ट्रीय डिशको रूपमा शेकिब्रोबुलाई जान्दछ । यस देशका बासिन्दाहरू क्रिस वेफर परीक्षणमा नट पाईको धेरै मनपर्छ, कि यस व्यञ्जन बिना अजरबैजानमा कुनै छुट्टी छैन काम गर्दैन! कुनै पनि महान् उत्सवमा शेकिर्ब फ्लाइट गर्दछ।
पुरातन ईरान मा प्रयोग गरे जस्तै अज़रबैजान अज़रबैजान भोजन प्रदान गर्दछ। हामी यसलाई लागू गर्न प्रयास गर्नेछौं।
Shekerbury को लागि सामग्री
यो सम्भव छैन कि अजेरिस मापन बर्तन र भान्सा तराजूहरु को उपयोग गर्नुहोस, जब प्रत्येक केटी को शुरुआती नाखून देखि ज्ञात एक डिश तयार हुन्छ। तर जब हामी अझै सिक्न सक्छौं, हामी सटीक खुराकहरू प्रयोग गर्नेछौं र त्यसपछि हामी निश्चित रूपमा एक वास्तविक shekerbour प्राप्त गर्नेछौं।
नुस्खा निम्न घटक को उपयोग को मानिन्छ:
आटा - 400 जी;
खमीर - 20 जी;
खट्टा क्रीम वा मोटो घरको क्रीम -2चम्मच। एल।
अण्डा -5पीसी।;
मक्खन मक्खन - 100 जी;
पागल को कुचल कर्नेल - 1 वस्तु;
चिनी - 1 चम्मच।
विनिला, गृहिणी, दालचीनी - वैकल्पिक, एक सानो चुटकीको लागि।
प्रायजसो, अखरोटहरू पाना बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। कर्नेलहरू फिलिमहरूबाट जहाँसम्म सम्भवतया छुट्याउन सकिन्छ, र आवश्यक भएमा सूखा फ्राइङ प्यानमा गणना गरिन्छ। यस भोजनको लागि उपयुक्त हजेल नट, काजू र बादाम पनि छन्। मूंगफली एक मूंगफली देखि पकाएको छैन।
आटा कसरी बनाउने
उचित रूपमा आटा - एक प्रतिज्ञा छ कि तपाईं एक सज्जन प्राप्त हुनेछ, तर एकै समयमा, क्रिसमस shekerbura बिट। तस्बिरको साथ नुस्खा कसरी प्रक्रिया चलिरहेको छ कल्पना गर्न मद्दत गर्नेछ।
सूखे दूध खमीर खान्छन् र यसलाई हल्का ठाउँमा छोटो छोडिदिनुहोस्। प्रक्रिया छिटो चलाउनको लागी, तपाईं शर्कराको सानो चुम्बन थप्न सक्नुहुनेछ।
यस समयमा, आटा उठाउनुहोस्। एक अलग कटोरा मा, अण्डा हँसिलो, काँटाको साथ विभाजित गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई हट तेल जोड्नुहोस्, फेरि हलचल। खानुहोस् क्रीम (वा खट्टा क्रीम) र खमीरसँग दूध। मिक्सर एक असाधारण सामूहिक मासमा मिक्सर वा व्हाइजको साथ बनाउनुहोस् र एक तयार कन्टेनरमा आटा सँग जोड्नुहोस्।
पूर्वका केहि गृहिणीहरूले आटा आफ्नो हातले सीधा घुमाए। तपाईले जस्तै मनपराउन सक्नुहुन्छ: फोर्क, चम्मच, व्हिस्क र यहाँ सम्म कि बिजुली आटा। तपाईं कुनै पनि स्थितिमा यो शर्करा बाहिर जान्छ। पकावट सरल, भरोसेमंद र धेरै पीडितहरूको लागि परीक्षण गरिएको छ, ताकि नतिजाको रूपमा, तपाईं शंका गर्न सक्नुहुन्न। मुख्य चीज - भरिएको टेस्ट एक वाफल तौलिया अन्तर्गत आराम गर्न दिन नबिर्सनुहोस्।
अखरोट पानाको लागि भरिएको
बीचमा, आटाले बल पाइरहेको छ, भरिएको व्यवहारमा गरौं। एक चुरोट संग पागल डालो, मापदण्ड को लागी उनको संख्या को माप र बिल्कुल चीनी को जोड्नुहोस।
त्यो सबै छ! यो केवल राम्ररी मिश्रण गर्न बनी रहन्छ।
मोडलिंगको लागि तयारी
यस समयमा, तपाईं ओवनलाई तातो बनाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आटा विभाजनमा साना टुक्राहरु, गणना र अनुमानित टुक्राहरु मा विभाजित गर्नुहोस् तपाईले कसरी पाउनु हुन्छ। यो राम्रो छ कि Shecherbour लाई टुक्राद्वारा राखिएको पिकमा ट्रे र तुरुन्तै तालिकामा राख्नुहोस्। ध्यान राख्नुहोस् कि हातमा मोडलिंगको क्रममा तपाईलाई आवश्यक सबै कुरा थियो।
अजरी शेकेबरबब कस्तो देखिन्छ भनेर ध्यान दिनुहोस्। तस्बिरको साथ नुस्खाले देखाउँछ कि पटाईका पक्षहरू असामान्य ढाँचामा ढाकिएको छ। यो बनाइएको उत्पादनहरूमा लागू हुन्छ।
प्रत्येक आटा रोल्पाङमा रोल गर्नुहोस् र भरिएको एक मिठाई चम्मचको बारेमा एक किनारमा राख्नुहोस्। सुँगुरको किनारमा सुरक्षित राख्नुहोस्, जस्तै डुङ्गा लगाउने। दृश्यात्मक किनारा - एक महत्त्वपूर्ण विवरण, रूपमा ढाँचाको रूपमा आवश्यक।
अजरबैजानमा र केन्द्रीय एशियाका धेरै अन्य देशहरूमा बिक्री यो किनारमा स्पेसको साथ विशेष चिन्ताहरू खोज्न सजिलो छ, जसलाई उद्देश्यले शिकरबूमा ढाँचा बनाउनु हो। धेरै परिवारमा, यस उपकरण धेरै पीढीहरू मार्फत जन्मिएको छ।
यदि तपाईंको भान्सामा यी चिन्ताहरूसँग मिल्ने कुनै पनि चीज भेटिएन भने, तपाईंले प्रयोग गर्नुपर्नेछ, तपाईंको औंलाहरू सँग तह बनाउन र फोर्क जबरजस्ती आवेदन गर्नु पर्छ। फंतासी विन्डो गरौं, र तपाईले निश्चित परिणाम पाउनुहुनेछ।
शर्कबर्बर गोठालो हुनु हुँदैन। ओवनमा यो पकाउने मात्र सुकेको छ, बाहिरी बत्तीमा। यसैले, पूर्व कोटेड ओवन को तल को स्थिति मा पैन राख्नुहोस र लगभग 15 मिनेट को लागि पकाएँ। तैयारीको बारेमा तपाई सबै घरमा फैलिएको अखरोट बेकिंगको मासु द्वारा सूचित गरिनेछ।
तालिकामा पेश गर्ने नियम
शर्कबर्बर, जसको नुस्खा पूर्वीबाट आयो, अक्सर प्रायः अन्य पारंपरिक मिठाइहरु को लागी सेवा गरिन्छ, उदाहरणका लागि, बिडबड्स र पखलोवा। यी उपचारहरू खाओ, आफ्नो हातमा समात्न। एड-अनको रूपमा, उत्तम प्रकारको चिया, अरोमेटिक पकाएको कफी, कम्पोज्ट वा रस आदर्श हुन्। तर अल्कोहल शराबको लागि स्वीकार्य छैन।
केक "कोलिब्रिरी" जेमी ओलिभर
कद्दिन मिठाई उपयोगी छ के हो
कस्टर्ड पाई कसरी गर्ने?
बहुविधमा खट्टा क्रीममा पाई। खाना र खाना पकाउने सुझावहरू।
एक रसदार शैली मा पाक कला। रस्सीको शैलीमा विवाहको केक: सजावट
पनीरको साथ कसरी म्याननिक पकाउने?
स्वादिष्ट आलु स्लिभ कसरी बनाउने? पकाना लागि आवश्यक?
अफ्रीका को बच्चाहरु: जीवित अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा
के पाखुरा मा टाटु गर्छ
धर्म अजरबैजानी फरक faiths को मित्र
भौगोलिक सुविधा के हो? भौगोलिक वस्तुहरु: नाम
ब्वाँसा किन साँच्चै चन्द्र मा चीख़ सिक्न
मारिया Berseneva: रूसी अभिनेत्री को जीवनी